U-Maketa: Uhambo lwe-SA A lusize abadlali bama-Test kakhulu
South Africa A coach Malibongwe Maketa
Umqeqeshi we-South Africa A u-Malibongwe Maketa ubheke uhambo lwabo lase-India olaphela ngoLwesihlanu, uncome uhambo kulabo abaluhlela, nokho imiphumela ayihambisananga nabo.
Izivakashi zahlulwa kwi-series yemidlalo yosuku eyayiphazanyiswa imvula bedlala ne-India A ngo-4-1, ngaphambi kokuhlulwa kwi-series yemidlalo emine emibili ngo-1-0 bedlala neqembu elifanayo.
Kuyona yonke imidlalo, umdlalo wokugcina e-Mysore uwona obugqugquzela emuva kwamakhulu amabili amakhulu ashaywe ukapteni u-Aiden Markram no-Wiaan Mulder, kwaba khona abashwibe kahle njengo-Vernon Philander, u-Lungi Ngidi no-Dane Piedt.
Abadlali abayisikhombisa abayingxenye ye-SA A XI bazoba ingxenye yeqembu lama-Standard Bank Proteas elizodlala ne-India kwimidlalo emithathu ye-Test series ezoqala ngesonto elizayo futhi isipiliyoni abasitholile kuhambo le-A lizosiza abadlali besizwe, kusho u-Maketa.
“Bekukuhle okwenziwe i-Cricket South Africa ukuqiniseka ukuthi bekukhona iqembu le-A khona ukusiza abadlali bama-Test balungiselele,” kusho umqeqeshi.
“Ngoba ukunqoba e-India kumele uchithe isikhathi eside khona.”
“Futhi, uma ubheka manje, abadlali abazoya kwi-Test series, cishe bacithe amasonto amabili ngaphambi komdlalo wokuqala wokulungiselela wama-Proteas, okuhle kakhulu kithina uma kukhulunywa ngokujwayela, ukujwayela kwemilenze kanye nokuqina kwabadlali.”
“Bayazi ukuthi balindeleni kuyela kwi-Test yokuqala ngoba sebelapha isikhashana, ngakho kulungile futhi yinto okumele siyibheke.”
“Ezinye izizwe ziyakwenza futhi esinye isizathu sokuthi bathole impumelelo phesheya. Sizobe sidlala ikhilikithi eningi kwi-sub-continent ngakho kuzobaluleka kithi ukuthi sibengaphezulu khona.”
Nokho engekho kwiqembu lama-Test, u-Mulder uqede nama-runs amaningi kwimidlalo emine nama-runs awu-198 kuma-innings amathathu, kwathi i-man-of-the-series u-Markram akasalanga ngemuva kakhulu nama-runs awu-165 kuma-innings amathathu.
Ukapteni wenze kahle kakhulu kwi-innings yokugcina, washaya u-161. Oyi-spinner u-Piedt, uzobe ehlose ukucacisa ngokubuya kwakhe kwiqembu lama-Test emuva kokungabi khona iminyaka emithathu, uqede ekhiphe izinti eziningi eziyishagalolunye kuma-overs awu-80.
“Umdlalo wokugcina ubugqugquzelana,” kusho u-Maketa. “Ukubona u-Aiden eshaya ngendlela ashaya ngayo, kwakhombisa isigaba sakhe. u-Wiaan naye kwadlala i-innings enhle ukweseka. Ngakho amakhulu amabili ebemahle kithina.”
“u-Vernon ushwibe ama-overs amaningi, no-Lungi udlale kahle kuma-Test amabili. Kubona bobabili futhi konke kuyela kwi-series ebalulekile, bangazizwa begqugquzelekile.”
“Kuningi okuhle kulaba abazosala e-India. Kube uhlelo lokho kuyela kwi-Test series yama-Proteas.”
Ngaphandle kwalaba ababalwe u-Maketa, imidlalo embili – owokuqala owaphela ngokuhlulwa ngezinti eziyisikhombisa e-Trivandrum – khona abathole ithuba lokudlala abakwiqembu lama-Test njengo-Zubayr Hamza, u-Theunis de Bruyn, u-Heinrich Klaasen no-Senuran Muthusamy.
Noma kuthiwa abakhethayo bakhetha ubani kumdlalo wokuqala we-Test e-Visakhapatnam, u-Maketa ubenamagama aqinile okululeka.
“Ama-runs e-innings yokuqala e-India abalulekile futhi ukwazi ukushwiba ama-maidens amaningi kanye nokwakha incindezi amagama aqinile okululeka.”
“Kubalulekile ukubekezela futhi ngikhululekile ukuthi bayakwazi lokho. Ukwenza nje isikhathi eside.”
u-Beuran Hendricks ubeke ama-Proteas endleleni yokunqoba Ukunqaka okumangazayo kwa-Kohli no-Miller kugqamisa umdlalo we-T20 Abashwiba kwi-SA A bathwale kanzima osukwini lokuqala Umdlalo wokuqala wama-Proteas we-T20 international umiswe imvula i-CSA ibeka u-Amol Muzumdar njengomqeqeshi wokushaya obambile kwiqembu lama-Test kuma-Proteas i-CSA imemezela abasebenzi abazoseka kuhambo lwama-Proteas lase-India i-CSA ibala u-Nortje, u-Muthusamy no-Second njengabadlali abasha kuma-Test u-Rassie van der Dussen unikwe inkontileka yesizwe u-Enoch Nkwe uyena obambile kuma-Proteas njenge-Team Director u-Hashim Amla uthatha umhlalaphansi kwikhilikithi yezizwe u-Faf ujabulela umbono we-ICC World Test Championship